Iziphesheli Zezinwele Zezinwele Ze-Virgin: Thenga ama-Remy Natural Textures ukuze athengiswe
Bonisa i-12 ekhasini Bonisa i-24 ekhasini Bonisa i-48 ekhasini
Ukubonisa yonke 8 imiphumela
Kulinganiselwe ngo- 4.69 aphume 5
Kulinganiselwe ngo- 4.79 aphume 5
Izibopho Zezinwele Ezibukhali
Kulinganiselwe ngo- 4.65 aphume 5
Afro Kinky Isikhwama
Kulinganiselwe ngo- 4.80 aphume 5
Isibopho Esiqinile Samathambo
I-Best VIRGIN REMY Izinwele Zabantu Izinwele
Lapha ku-My Natural HIAr Extensions, siyaziqhenya ngemikhiqizo yethu. Izandiso zethu zidalwe futhi zenziwe ngobuciko kwabesifazane bombala ngabesifazane abanemibala! Umkhiqizo wethu uphethe izandiso ezincane zakwa-Remy. I-Virgin isho ukuthi izinwele zikhululekile kumakhemikhali anonya, kanti i-Remy isho ukuthi izinwele zezinwele zihambisana nendawo efanayo ekunciphiseni izinkinga zokugubha. Sinezandiso ezitholela bonke udadewethu. Inkampani yethu ingabizwa ngokuthi "Izindwangu Zami Zemvelo Zomzimba" Kodwa sinezandiso ze-divas zethu ezikhululekile futhi!
Umzila wethu wokwandisa ngokwemvelo uhlanganisa i-Curly, iKinky Curly, Coily, kanye ne-Afro Kinky! Ngiyaqiniseka ukuthi ungathola ukuhlanganiswa kwakho okuphelele. Umzila wethu wokuLungiselela we-Straight uhlanganisa i-Perm Yaki, i-Coarse Yaki, neqoqo le-Kinky Straight. Zonke izibopho zethu zinokuvalwa okufanayo. I-Frontal izohlinzeka maduzane esikhathini esizayo esiseduze. Izinqwaba zethu zingumgangatho ophezulu 100% izintombi zobuntombi be-Remy izinwele.
Uma ufunda lokhu, khona-ke usendleleni efanele yokuthola isethi engcono kakhulu kwezandiso ezingahlanganisi nje ngokumangalisayo ngezinwele zakho kodwa zikhuthaza ukukhula kwezinwele. Izandiso ezifanele ezisetshenziswe kahle zingasiza izinwele zakho zikhule futhi zakha izitayela zokuzivikela ezimangalisayo. Yeka ukulimaza ikhefu lakho bese uzama ukuxuba namanye izinwele zemvelo. Thuthukisa izinwele zakho zemvelo, ungayishintshi!